कोरोनाविरुद्धको रुसी भ्याक्सिनमा संसारभर भरोसा किन छैन ? यी हुन् मुख्य ६ कारण – Sanchar Patrika
August 12, 2020 184
एजेन्सी । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्नो देशले कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन बनाएको घोषणा गरेका छन् । मंगलबार यो घोषणासँगै संसारभर रुसी भ्याक्सिनलाई शंकाको दृष्टिले हेरिएको छ । भ्याक्सिनलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ)ले पनि मान्यता दिएको छैन । यो भ्याक्सिनमा किन धेरै प्रश्न गरियो त ? भ्याक्सिनका विषयमा मुख्य ६ वटा प्रश्न उठेका छन् ।
Nextनविल बैंकले घर/जग्गा किन्न ७. ९ प्रतिशत ब्याजदरमै ऋण दिने, कसरी लिने र के के चाहिन्छ कागजात?
आफू भन्दा क’म उमेरकी महिलासँग स’म्बन्ध रा ख्दा भुल्नै नहुने यी ५ कुराहरु